Sheekh Dirir oo Khudbad Kaga Hadlay Qaababka Kala Duwan ee loo Sameeyo Musuqmaasuqa iyo Sida Looga Tawbad Keeni Karo Xatooyada Xoolaha Ummadda - Somaliland Post
Home News Sheekh Dirir oo Khudbad Kaga Hadlay Qaababka Kala Duwan ee loo Sameeyo...
Sheekh Dirir oo Khudbad Kaga Hadlay Qaababka Kala Duwan ee loo Sameeyo Musuqmaasuqa iyo Sida Looga Tawbad Keeni Karo Xatooyada Xoolaha Ummadda
Hargeysa (SLpost)- Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida, ayaa la wadaagay bulshada sida ay xaaran u tahay in lagu xad-gudbo, sifo gaar ah oo xatooyo ahna loogu qaato xoolaha danta guud ah ee ka wada dhexeeya ummadda.
Waxa ay shareecadu ka qabto in cid gaar ah isticmaasho wax ummadda ka dhexeeya oo maalkooda ah.
Hababka loogu xad-gudbaa waa noocyadee
Hantida la wada leeyahay in aynu tusaalayaal ka bixinno
Asbaabaha ama sababaha keeni kara in lagu xad-gudbo xoolaha ummadda ka dhexeeya
Maxaa innagala gudban in aynu wada ilaalino xoolaha aynu wada leennahay
Qofka ku dhagarooba ee qaatay ama ay gacantu ay kaga dhacday xoolaha ummaddu habka uu uga towbad keenayo
Waxa ka mid ah siyaabaha loo xadayo waxyaabo yaryar oo aanay dadku iskaba filayn oo ah saacadaha biyaha iyo saacadaha laydhka oo la joojiyo ama wax laga beddelo ama lacagta oo lala baxsado, waana wixii dadka ka dhexeeyey oo shirkaduhu ha lahaadeen ama Xukuumaddu ha lahaato, waxayna ka mid tahay noocyada tuugada ah ee dadkuna iskaba yara xaalaashadaan.
Waxa ka mid ah agabka loo isticmaalo shaqada ummadda ka dhexaysa ama shirkadaha ka dhexaysa, sida kombuutarada, telefoonnada, gaadiidka iyo waxyaabahaas oo dhan in danaha khaaska ah loo isticmaalo waa nooc xatooyo ah (laakiin) haddii aad shidaalka iska xisaabiso, lacagta halkaas kaaga baxdayna aad xisaabiso.
Waxa kaloo ka mid ah siyaabaha wax loo xado marka aad joogto meel dhexe oo aad dadka wax ka iibinayso ama Hay’ad ama Xukuumad ama Shirkad in cidda macmiisha ah ee kuu imanaysa aad wax ka qaado oo aad tidhaahdo; ‘haddii aanad wax i siinin, aniguna ku siin maayo mashruucan isaga ah ama aniga wax iga iibsan maysid ee cid wax i siinaysa ayaan ka iibin doonaa.’ Taasina way iska badan tahay muddooyinkan dambe oo waa wax caam iska noqdayba, waana nooc ka mid ah laaluushka.
Waxa ka mid ah waxyaabaha ay ummaddu wada leedahay oo ay dadku burburiyaan, waana arrin aad u cajiib ah oo dadku marka ay Xukuumadaha la coloobaan waxay iskaga rabbaysmaan in wixii dowlad ka soo jeeda ama sida caamka ah loo wada leeyahay in la xado ama la jajabiyo ama la burburiyo. Haddii ay dadku cadhoodaan waa laga yaabaa inay ka baydhaan waxa (hantida) uu qofka gaarka ah leeyahay, laakiin waxa la wada leeyahay in la burburiyo, taasina waxay ka mid tahay tacadiga iyo xad-gudubka hantida ummadda ka dhexaysay.
Waxa ka mid ah goobaha la wada leeyahay in lagu xad-gudbo, sida masaajidka oo kale oo kutubtiisa, gogoshiisa, cawihiisa iyo allaabta uu leeyahay in aanad qaadan karin, waana waqaf mucayin ah oo halkaas ayuu u gaar yahay, waxaanna loola dhaqmayaa sida agoonka oo agoonka wixiisa wax ayuunbaa loogu beddelaa.
Masaajidada iyo goobaha waxbarashada, sida jaamacadaha, dugsiyada (schools), madaariska, macaahiidda diiniga ah, cusbitaallada, xannaanooyinka lagu daawaynayo ummadda kuwooda buka, meelaha agoonta lagu barbaariyo iyo dadka waaweyn, meelaha lagu qabto danaha guud oo dhan, sida waddooyinka oo waddadaas agteena ah waxay ka mid tahay hantida aynu wada leenahay oo guri aynu wada leenahay ayeyu dhigantaa, sidaa darted inuu qof gaar ah iska goosto ama uu iskaga shaqaysto ama xidho waxay ka dhigan tahay xoolihii ummadda oo uu boobay.
Waxa ka mid ah biriijyada, dekedaha, garoomada, goobaha lagu ciyaaro ee ay carruurteennu ku logo-fidsanayaan, waxa ka mid ah beeraha loogu talogalay in dadku ku nastaan.
Waxa ka mid ah macdanta ummadda ka dhexaysa, baadka ka baxaya baadiyaha, dhirta, sidaa darteed dadka qaarkood haddii ay macdanta iska xidhaan ama shidaalka iska xidhaan ama cawskii iska ootaan waaba sida iska badan ee ka dhacda degaannada miyiga ama dhirtii inta ay xidhaan ay gubaan, qofka sidaas sameeyaana waa daalim, waxayna ka dhigan tahay nin qaatay lacagta baanka taal oo kale.
Waxa ka mid ah webiyada iyo biyaha la wada cabbayey ee qulqulayey meelahaas, sida uu Nabigu (SCW) xusay, dhammaantoodna waxa wada leh innaga iyo ubadkeena soo socda.
Daciifnimo iimaanka iyo caqiidada ah ama ducful-iimaan ama iimaankooda oo qoonma, maxaa yeelay? Iimaanka ayaa qofka ku abuura inuu kala eego xaaraanta iyo xalaasha oo uu is yidhaahdo; “maxaa kuu xalaal ah, maxaase kaa xaaraan ah? Laakiin marka iimaanku ka qoonmo qofka, waxa u hamuumaysa oo u hillaacaysa adduunyada yar ee natiijada dambe ma eegayo.
Waxa ka mid ah in qofka akhlaaqdiisu qalloocanto oo xiiitaa xishoodku ka lumo. Dadku inta ay sii leeyihiin gobonnimada, sharaf ay ilaashadaan iyo dhegtooda oo ay dhowraan oo uu u tudhayo magaca reer hebel, magaciisa iyo magaca qoyskiisa arrimahaa kuma dhacaan, balse had iyo jeer marka ay dadka gobonnimadu ka lunto ee ay gunnimada u dhacaan weeyaan marka ay boobayaan wixii ka dhexeeyey
Waxa ka mid ah (in xoolaha ummadda la boobo) isagoo qofku jaahil ka ah diintiisa ama aan garanayn xeer ciqaabeedka shareecada islaamku u dhigtay in ay in badan oo ka mid ah culimada islaamku ay qabaan in qofka hanti ummadeed qaatay gacanta la goynayo, hantidii uu qaatayna laga soo celinayo. Waa la isku waafaqsan yahay in wixii qaatay laga soo celinayo, laakiin in badan waxay qabaan in gacantana la gooyo.
Asbaabta keenta xatooyada waxa ka mid ah in qofkan wax xadaya aannu qalbigiisa Ilaahayba ku jirin oo aannu ogeyn in Ilaahay eegayo oo isha Ilaahay hayso, kana warhayn, markaa waa qof qaafil ah.
Waxa ka mid ah asbaabaha xatooyada keenaysa iyadoo aan la oogayn shareecadda islaamka oo ummaddaasi aanay ahayn ummad fulinaysa, hirgelinaysa oo ku dhaqmaysa shareecada, waayo marka shareecada lagu dhaqmayo qof walba ciqaabta uu mudan yahay ayaa la marinayaa oo kii cid gaar ah wax ka xadda, kii xoolaha ummadda xadda, taqsiirtii iyo xuduuddii oo dhan, laakiin marka aan shareecada lagu dhaqmayn way iska badanaysaa; ‘amba qaataye adiguna qaado.
Asbaabta keena in xoolaha ummadda lagu tagri-falo waxa ka mid ah Dowladda oo daciif noqota oo waajibkeedii gudan kari weyda, taas ayaana keeni karta in cid walba ay qaadato wax aanay lahayn ama wixii ummadda ka dhexeeyey la iska qaato.
Waxa ka mid ah qofka ummadda ugu sareeya ee hoggaamiyaha (Madaxweynaha) oo doorkiisa qaadan waaya oo ka gaabiya, taasina waa waxyaabaha keenaysa in dadku kala qaataan wixii ummadda ka dhexeeyey ee uu isagu (hoggaamiyuhu) u ilaalinayey ama ku xad-gudbaan ama daryeeli waayaan, sidaa darteed ayuu Cumar Binu Khadaab (RC) lahaa odhaahdan ah; ‘Haddii ay waddooyinka Ciraaq ka xumaadaan oo dadka iska daaye ay xoolahu wax ku noqdaan ama ku jabaan, qiyaamaha Cumar ayuu Ilaahay weydiinayaa oo la odhanayaa; ‘Cumaroow, maxaad dadka iyo duunyada dariiqa ugu hagaajin weyday? Xiligaasna Ciraaq iyo Madiina aad ayey u kala fogaayeen, markaa sidaas ayey Khulafadu u fikirayeen.
Waxa asbaabaha ka mid ah in ay ummadda ku yaraato naxariistii walaaltinnimada iyo tudhaallaha islaamka oo ay ehelnimada iyo axsaabnimadii dadka ku yaraadaan, waayo qofku wuxuu odhan lahaa; ‘bal ummadaada u kaadi kuwo sidaa iyo sidaau dhibban ayaa ku jiree oo waxan waa lagula leeyahaye adigu dadka u tudh?. Markaa tudhaallihiina ma jiro.